"....ऊ नेपालको छोरो" :: Press Chautari ::
"....ऊ नेपालको छोरो"
-प्रशान एलुङ् राई
उनी मेची पारी भारतमा जन्मिए तर मेची वारी नेपाललाई कर्म थलो बनाए । सायद केहि लिएनन् उनले । बदलामा पुरै देशले तिर्न नसक्ने गुन लगाए गए । तीन दशक भन्दा लामो समय नेपाली संगीत क्षेत्रमा निरन्तर योगदान पुर्याएर त्रिपन्न बर्षको उमेरमा अस्ताए –गोपाल योञ्जन ।
बिक्रम् सम्बत् २०२४ तिर गीतकार नागेन्द्र थापाको साथ लागेर नेपाल आएका स्वर्गिय गोपाल योञ्जनको निम्ति राष्ट्रियता भन्दा माथि आफ्नो जाति र भाषा रह््यो । अनि त नेपाली भाषा र जातिकै निम्ति झोलाभरी मुरली र बाँसुरी भिरेर मेची तरे । सयौं गीतहरुमा कालजयी धुन भरे । नेपाली कला, भाषा र मौलिक संस्कृति उता मिसिन नदिएर यतै छरे । वाह ! आफ्नो जाति र भाषाको कत्रो मोह उनीभित्र ? त्यसैले त राष्ट्रियता मेची पुल पारी छाडेर प्रत्येक नेपालीको हृदय छुने सिर्जनाभित्र सिंगो नेपाललाई छातीमा टाँसे । बैरीले पारीको मान्छे भने पनि आपूmले चाँहि यहि देशको छोरो ठाने । किन कि उनको नशा, रगत र धमनीहरुमा नेपाल सिंचित थियो ।
“बनेको छ पहराले यो छाती मेरो
बगेको छहरा रगतमा मेरो
पखेरोमा जन्मे टाकुरामा खेल्ने
म झुक्दै नझुक्ने नेपालको छोरो ।”
साँच्चै हरेक नेपालीले छाती उँचो पारेर गाउँने गीत उनैले सिर्जे । जन्मलाई भूगोलको सिमानाले छुट्टायो त के भो ? कर्मले यो देशको स्वाभिमान सगरमाथा जत्तिकै अग्लो उभ्याँइ दिए । भन्ने नै हो भने त उनले जत्तिको नेपाली स्वाभिमान र राष्ट्रप्रेमको गीत कसले पो लेखेका होलान् ? कसले नै गाएका होलान खाट्टी नेपाली माटोको गीत ? राष्ट्र पे्रम भन्ने कुरा कुनै घर–दरबार अगाडि ठूलो आकारको झण्डा गाड्दैमा मात्र हुँदैन । न त कसैले आफ्नो घरको भित्तामा देशको तस्विर तुलुङ्ग भुण्ड्याउँदैमा पुरा हुन्छ । देशभत्ति र प्रेम त्यहि भुगोलको माटो कुल्चिनु मात्र होइन । त्यो देशको माटोको सुवास चिन्न सक्नु पनि हो । जुन प्रवासमा जन्मि हुर्केका गोपाल योञ्जनले गरे । प्रवासमै बसेर उनले सुँघेका थिए नेपाली माटोको सुवास । र त प्रवासमै बसेर उनले खिपेका थिए त्यस्तै अर्को कालजयी गीत –
“देशले रगत मागे मलाई बलि चढाऊ
रुँदिनन् मेरी आमा उ नेपालको छोरो”
यो गीत उनले दार्जिलिङ्गमै बस्दा रचेका हुन् रे । जत्ति बेला उनले नेपाल भन्ने देश देखेकै थिएनन् । भारतको दार्जिलिङ्गमा स्कुले हुँदै उनले यस्ता कैयौ मर्मस्पर्शी गीतहरुको सिर्जना गरे । उनले आफ्ना हरेक सिर्जनाहरुमा नेपाली कला र मौलिकता मिसाएका छन् । उनले भरेका प्रत्येक धुनहरुले नेपाली माटोको सुगन्ध बोकेकाछन् । सरल अनि चोटिलो शब्दहरुमा लोकिलो भाका हालेर उर्जाशील आवाज प्रस्तुत गर्नु उनको विशेषता नै हो । त्यसैले त उनी नेपाली संगीत क्षेत्रमा शब्दशिल्पी, संगीत सर्जक र गायन कलाको बेजोड अनि अभूतपुर्व त्रिवेणी हुन् ।
नेपाली आधुनिक सुगम संगीतको स्वर्णकालमा नेपाली संगीत क्षेत्रलाई लाख गुन लगाएर झण्डै सोह््र बर्ष अघि अस्ताएका गोपाल योञ्जनको बितेको साता पूण्यतिथि थियो । थाह छैन उनलाई कसले कसरी सम्भेंm । नेपाली गीत संगीतको श्रीबृद्धिको निम्ति खोलिएका संगठन र स्कुलहरुमा गोपाल योञ्जन बजे बजेनन् । रेडियो टेलिभिजनहरुमा उनको पूण्यतिथीको बारेमा दुईचार शब्दले ठाउँ पाए पाएनन् । तर प्रवासमा हली जिन्दगी जिउने लाखौं जनले भने पक्कै सम्झेकाछन् । यसपाली मैले पनि जोत्दै गरेको यहि फोक्टाबाट यसै गरि सम्झिए –गोपाल योञ्जनलाई ।
संगीत उद्योगको विशाल बजारकै रुपमा स्थापित भारतबाट अनेकौं पल्ट थुप्रै अवसरहरु नकारेका गोपाल योञ्जनले नेपाली संगीत क्षेत्रमा सयौं अजम्बरी कालजयी गीतहरु दिएर गए । त्रिपन्न बर्षको छोटो आयु लिएर आएका उनले उन्नाईस बर्षको केटौले उमेरमा नै आफ्नो जीवन गाथा यसरी शब्दहरुमा उनेका थिए–
“मेरो गीत मेरै प्रतिविम्व होइन,
जो फुटी जाने छैन टुटी जाने छैन
आकास जस्तो अमर गीत मेरा
म जस्तो दुई दिनको पाहुना होइन ”
यहि गीतमा मीतज्यू नारायण गोपालले जिवन्त आवाज भरि दिए । गीतका शब्दहरुमा पोखिए जस्तै दुई दिनकै पाहुना भएर आए र नेपाली संगीत आकासमा अमर सिर्जना छोडेर गए –गोपाल योञ्जन । उनी प्रति भावपूर्ण श्रद्धा सुमन ।
मंगलवार, २०७० पुस २९ गते ०७:३३ / Tuesday, Jan 14, 2014 7:33 am
अरु समाचारहरु :: समय सन्दर्भ
1. समय सन्दर्भ : आऊ मिलाऔं हाम्रा हातहरु
2. यस कारण ईन्स्योरेन्स “आतंक”
3. समय सन्दर्भ : नेहालाई न्याय
4. समय सन्दर्भ : छ कोहि ?
5. समय सन्दर्भ – “छ हिम्मत ?”
6. सक्छौं त पहाड थाम्न ?
7. झुम्लावाङ्गमा 'नजर'
8. 'हुस्' ! विमला
9. देश र दशैं
10. ऊ...तुलसी घिमिरे
11. तेरिया तरङ्ग
12. छड्के : हामीलाई घट्दो क्यामेरा मोह
13. समय सन्दर्भ : खस्रा खरेल
15. शोकाकुल सगरमाथा
16. नयाँ बर्ष
17. कीतिमार्नी क्रिकेटर
18. गौरीलाई : यता बाई-उता हाई
19. ...उता दिलशोभा दुख्दा
20. सारंगी रुदैछ....
21. डाक्टर साप, ऊ मर्न लागेको छ
22. “फुल टाइमर जोर्नालिष्ट”
23. "दिल्ली दौडाह"
24. "वेम्बलीमा नेपथ्य"
25. राहतमा राजनीति
Results 37: You are at page 1 of 2